Faah faahin laga bixiyey Sababta uu Alexis Sanchez uga haray safarkii Maraykanka ee kooxdiisa? | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Faah faahin laga bixiyey Sababta uu Alexis Sanchez uga haray safarkii Maraykanka ee kooxdiisa?
(17-7-2018) Cayaaryahanka kooxda Manchester United ayaa u duulay dalka Maraykanka halkaas oo ay kaga qayb gali doonaan koobka saaxiibtinimo ee xagaaga kasta waqtigan oo kale la qabto ee ICC Cupka laakiin markii ay soo baxeen sawirada ciyaartoyda Man United waxaa laga dhex waayay Alexis Sanchez kaas oo aan xataa koobka aduunka ka qayb galin, waxayna jamaahiirta Man United is waydiinayeen sababta aan Sanchez liiska loogu soo darin.
Laakiin ugu danbayn waxaa sii buuxda u soo baxday sababta dhabta ah ee aanu Alexis Sanchez ula safrin Jose Mourinho iyo ciyaartoyda kooxdiisa Manchester United ee uu duulay dalka USA waxaana la xaqiijiyay in Visa-ha ama dal ku galka USA uu dhibaato ku noqday Sanchez.
Manchester United ayaa USA kula ciyaari doonta kooxaha Club America, San Jose Earthquakes, AC Milan, Liverpool iyo Real Madrid laakiin dhamaan kulamadan ayuu seegi doonaa Alexis Sanchez inkasta oo uu diyaar u ahaa in uu ciyaaro si uu xili ciyaareedka cusub ugu diyaar garoobo.
Laakiin jamaahiirta Manchester United oo xalaada ku jaho wareersan ayayna Man United wax faah faahin dheeraad ah ka bixin sababta aanu Sanchez kooxdeeda ula safrin waxayna jamaahiirta United isha ku hayeen dhaq dhaqaaqa Sanchez waxayna arkeen oo kaliya sawir uu Instagramkiisa soo dhigay oo uu qaabka timaha u xiirtay ku muujiyay.
Balse wariyaha BBC Sport ee Simon Stone wuxuuna bartiisa twitterka ku soo qoray in sababta aanu Sanchez ula safrin ciyaartoyda kale ee Man United ay tahay dhibaato ka soo wajahday dhinaca Visa-ha uu ugu safri lahaa dalka Maraykanka sabbatoo ah waxa uu aqbalay xukun 16 bilood uu xabsi ku mutaysan lahaa oo dalka Spain uu cashuur lunsi ku qirtay.
Wuxuuna Simon Stone soo qoray: ” Waxaan fahmay in ka maqnaashaha hadda ee Alexis Sanchez ee safarka Man United ay tahay sabab dhibaato visa-ha ah. Waxa uu isagu aqbalay xukun jeel 16 bilood ah oo bishii February lagaga joojiyay Spain. Waxaan loo gacan galin karayay warqad ka dhaafis ah laakiin hanaanka ayaa ka dheer inta la filayo”.
Si kastaba ha ahaatee, Alexis Sanchez ayay qasab ku tahay inuu sii sugo kooxdiisa Manchester United inta ay ku jiraan safarkooda USA haddii ayna kooxdiisa United samayn xal kale oo ay US ku keeni karto inkasta oo ayna hadda muuqan wax saan saan ahi.